GFG Taxanaha High-Karti qalajiyaha Bed Dheecaan - Shiinaha Changzhou Daming Pharmaceutical Qalabka
Codsiyada Waxaa haboon daawo, cunto, feed, warshadaha kiimikada waa iyo wixii la mid ah, joog, waayo, qalajinta budada ah taas oo uu leeyahay Mabda'a isbeddello wanaagsan Marka hawada waa la Daahiriyey iyo kuleelka, waxaa la soo bandhigay ka hoose ee taageere qaaca iyo maraa saxan screen ceedhiin wax. In qolkii shaqeeya, gobolka fluidization waxaa la aasaasay iyada oo la qasay iyo cadaadis xun. qoyaanka waxaa la uumibixiyey oo si degdeg ah looga saaro iyo wax cayriin waxaa si deg deg ah la qalajiyey Maqaallo 1. Qaab-dhismeedka sariirta dheecaanka waa r ...
Waxaa haboon daawo, cunto, feed, warshadaha kiimikada waa iyo wixii la mid ah, ku haboon, waayo, qalajinta budada ah taas oo uu leeyahay isbeddello wanaagsan
Marka hawada waa la Daahiriyey iyo kuleelka, waxaa la soo bandhigay ka hoose ee taageere qaaca iyo maraa saxan screen ee wax ceeriin. In qolkii shaqeeya, gobolka fluidization waxaa la aasaasay iyada oo la qasay iyo cadaadis xun. qoyaanka waxaa la uumibixiyey oo si degdeg ah looga saaro iyo wax cayriin waxaa si deg deg ah la qalajiyey
1. Qaab-dhismeedka sariirta dheecaanka waa ku wareegsan si looga fogaado geeska dhintay.
Inside Ayaxaasi waxaa ka yaabsaday si looga fogaado agglomeration mid ah waxyaabaha ceeriin iyo kanaalka la xirrira socodka. (Mashiinka Small ma taageeri stirrer)
2. granule The laga saaro iyada oo loo marayo habka ay u soo jeestay in ka badan. Sidaas, waxaa aad u sahlan oo dhakhso ah. nidaamka Fasaxidda loo qaabeeyay kartaa adigoo looga baahan yahay.
3. Waxaa la shaqeeya ee shuruudaha cadaadis xun iyo shaabadda. hawada la sifeeyo. Sidaa darteed waxaa fudud in hawlgal oo ku habboon in lagu nadiifiyo. Waa qalab fiican in uu yahay si waafaqsan shuruudda ah GMP.
4. xawaaraha qalajiyo waa mid dhakhso badan oo heerkulka waa labis. Guud ahaan waqti qalajiyo waa 20-30 daqiiqo.
awoodda Input (kg)
Inta hawada (m3 / h)
cadaadiska hawada (mmH2O)
awood kareyso (kw)
xawaaraha qaboobo (rpm)
isticmaalka Steam (kg / h)
waqti Operation (min)
15-30 (waxay ku xiran tahay wax cayriin)
: Previous DWF Taxanaha mesh-Belt qalajiyaha
Next: Taxanaha KJG godkii Blades qalajiyaha
Kibistii-jajabka Bed Dheecaan ka qalleyl
Kibistii-jajabka qalajiyaha Bed Dheecaan
Rooti jajabka buusho Bed qalajiyaha
Sii qalajiyaha Bed Dheecaan
Continuous Dheecaan Bed qalajiyaha Price
Qalleyl Bed Dheecaan
Qalajiyaha Bed Dheecaan
qalajiyaha Bed Dheecaan Oo Granulator
qalajiyaha Bed Dheecaan Waayo, Dhuxul
Qalajiyaha Bed Dheecaan Waayo Granule
Bed Dheecaan qalajiyaha Granulator
Dheecaan Machine qalajiyaha Bed
Bed Dheecaan qalajiyaha Price
Dheecaan Bed Qalabka qallajinta
Bed Dheecaan Machine qallajinta
Bed Dheecaan Granulating qalleyl
Bed Dheecaan Granulating qalajiyaha
Bed Dheecaan Granulator qalajiyaha
Fluided Bed qalajiyaha
buusho qalajiyaha Bed
Machine qallajinta buusho
Codsiga dhagaxyada Bed Dheecaan qalajiyaha
Powder Codsiga dhagaxyada qalajiyaha Bed Dheecaan
Karti Sare qalajiyaha Bed Dheecaan
Qalajiyaha Bed High hufan kulayl Dheecaan
Horizontal qalajiyaha Bed Dheecaan
Industrial Machine qalajiyaha Bed Dheecaan
Lab qalajiyaha Bed Dheecaan
Salt qalajiyaha Bed Dheecaan
Vertical qalajiyaha Bed Dheecaan
Xf Taxanaha Fluidizing qalajiyaha
YZG, FZG Taxanaha qalajiyaha Vacuum
DWF Taxanaha mesh-Belt qalajiyaha
Taxanaha KJG godkii Blades qalajiyaha
Qaybin Xawaaraha Sare-LPG Taxanaha bifbaafka qalajiyaha
Taxanaha ZPG qalajiyaha bifbaafka waayo, wax dhegdheg
SZG Taxanaha Double koorta qoqobada Vacuum qalajiyaha